1. Cylindrical လက်ဆောင်ထုပ်ခြင်းသည်ပွဲလမ်းသဘင်များသို့မဟုတ်အထူးနေ့များတွင်လက်တွေ့ကျနိုင်သည့်နောက်ထပ်အေးမြသောဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထုပ်ပိုးခြင်းအမျိုးအစားများကို cookie သေတ္တာများ၊ ချောကလက်သေတ္တာများစသည့်ဆလင်ဒါပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူအများစုကဆလင်ဒါလက်ဆောင်ထုပ်ခြင်းနည်းလမ်းသည်ခက်ခဲသော်လည်းတကယ်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဟုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။
2. ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ပစ္စည်းများ - လက်ဆောင်ထုပ်ခြင်းစက္ကူ - ကတ်ကြေး - Transparent masking tape - ပါးလွှာသောနှစ်ဖက်ကြွေပြား - Gift ribbon
3. ထုပ်သည့်စက္ကူကိုဖြန့်ပြီးဆလင်ဒါလက်ဆောင်ကိုထားပါ။ စက္ကူထိပ်အစွန်း၏အကွာအဝေးကိုသေတ္တာထဲ၌ထည့်ပါ
4. စက္ကူကိုသင်မူလနေရာချထားသည့်အရွယ်သို့ဖြတ်ပါ။ စက္ကူ၏အရှည်တစ်လျှောက်အနားဖြတ်တောက်ခြင်းအားဖြင့်
5. ရှည်လျားသောစတုဂံပုံလက်ဆောင်တစ်ခုရှိပါကဆလင်ဒါလက်ဆောင်သေတ္တာကိုဒေါင်လိုက်ထုပ်ပြီးစက္ကူအလယ်တွင်ထားပါ။ လိပ်ထုပ်ပြင်ဆင်ထားရန်စက္ကူ၏အစွန်းဆန့်ကျင်တစ်ဖက်။
7. ထို့နောက်လက်ဆောင်သေတ္တာကိုဒေါင်လိုက်ပိတ်ရန်စာရွက်၏အခြားဘက်ခြမ်းကိုပတ်ထားပါ။ တိပ်ခွေကိုမပိတ်နိုင်အောင်ခိုင်မာစွာလုံခြုံအောင်ထားပါ။
8. အောက်ခြေစက္ကူကိုပထမ ဦး ဆုံးခေါက်။ သေတ္တာ၏ထိပ်တွင်လှပသောဆုပ်ကိုင်ထားပါ။ ဘယ်ပရောဂျက်နဲ့ပရောပရည်လုပ်ရန်မခက်ခဲပါ
9. တစ်ဖက်နှင့်တိုက်မိသည့်စက္ကူ၏ထောင့်ကိုကိုင်ထားပါ၊ သေတ္တာထိပ်ပေါ်သို့ခေါက်။ ပွင့်လင်းသောတိပ်ခွေကိုကပ်ပါ။
10. စက္ကူလိပ်ကိုတူညီသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းနှိပ်ပြီးတွန့်ခြင်းအရွယ်အစားတူသည်အထိနှိပ်ခြင်းဖြင့်ထောင့်များကိုဖမ်းယူပါ။ ၃-၄ ကြိမ်ခေါက်သောအခါရှင်းလင်းလွယ်ကူခြင်းမရှိစေရန်ရှင်းလင်းသောကော်ကပ်တိပ်ကိုသုံးပါ။ အကွက်တစ်ခုလုံးအထိဤအရာကိုဆက်လုပ်ပါ။
11. ထိပ်နှင့်အဆုံးသတ်သောအခါ, တူညီသောအောက်ဆုံးတူလုပ်ဖို့ box ကိုလှန်လိုက်ပါ။ လှလှပပကစားခေါက်။
12. ဖဲကြိုး၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ နှစ်ဖက်နှစ်ဖက်ကပ်ကော်အနည်းငယ်ကိုဖြတ်ပါ။ ဘို၏နောက်ကျောပူးတွဲ ထို့နောက် Bo ကိုယူလာပြီး box ၏ထိပ်ကိုအလယ်သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနေရာတွင်ထားပါ။ ဒါပဲ။
13. ဆလင်ဒါလက်ဆောင်ကိုမည်သို့ထုပ်ရမည်နည်း။ ပွဲတော်ရာသီနှင့်နီးကပ်သည်နှင့်သင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြရန်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးလိုပါက သင့်ပတ်လည်ရှိသူများကိုဂရုစိုက်ပါ ထိုအခါဤကဲ့သို့သောလက်ဆောင်တစ်ခုခြုံဖို့ရှိသည် ထို့နောက်အတူတကွအသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါ